घर कपाल हटाउने उपकरण को तकनीकी जानकारी - तकनीकी जानकारी शेन्ज़ेन NOBLE स्मार्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी सीमित
उत्पाद प्रयोग सावधानीका बारे
डिजाइन प्रतिलिपि गर्दै
संरचना डिजाइन र इष्टतम
प्रसंस्करण र निर्माण
तपाईंको कपाल हटाउने बिभिन्न तरिकाहरू
१. प्रविष्टि-स्तर कपाल हटाउने विधि: कपाल हटाउने सब भन्दा साधारण विधिहरू: दाह्री खौरन, कपाल काट्ने, कपाल हटाउने मोम, कपाल हटाउने क्रीम, आदि।
Points पोइन्टहरू तपाईले आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण खरीद गर्नु अघि विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
घर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण खरीद गर्नु अघि तपाईले के विचार गर्नु पर्छ ठीक छ, हामीले तपाईको लागि सोचेका छौं।
के म कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गरेपछि बडी लोशन प्रयोग गर्न सक्छु?
१ 2019 XNUMX, देखि, कपाल हटाउने उपकरण बजारमा धेरै तातो बिक्रि हुने वस्तु भएको छ, र यो सजिलै घरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आईपीएल प्रयोग गरेपछि म के आशा गर्न सक्छु?
सामान्यतया पहिलो प्रयोग पछि, पहिलो हप्ताको लागि तपाईंले अझै केशहरू बढिरहेको देख्नुहुनेछ, र यी ती कपालहरू हुन् जुन उपचारको क्रममा बढ्दो चरणमा हुँदैनन्।
अपूर्ण कपाल हटाउने, शरीरको कपालको जीवनशैली कत्ति कठोर हुन्छ
पातहरू रमाईलो हुँदै गइरहेका छन् र फूलहरू फूलेको छ, ग्रीष्म ofतुको छवि अझ बलियो हुँदै गइरहेको छ, के तपाईं आज यसलाई महसुस गर्नुहुन्छ?
OEM / ODM को अर्थ घर कपाल हटाउने उपकरणहरूको लागि के हो जुन उद्योगमा व्यक्तिहरू प्राय: भन्छन्
जतिसक्दो चाँडो आफ्नो कपाल हटाउनुहोस्, तपाईंले आफ्नो कपाल हटाउनु अघि तपाईंको छाला कत्ति चिल्लो हुन्छ भनेर थाहा पाउँनुहुन्न।
अधिक र अधिक व्यक्तिहरूले घर कपाल हटाउने छनौट गर्नुको कारण के हो?
फोटोन कपाल हटाउने उपकरण, फ्रिजिंग पोइन्ट कपाल हटाउने उपकरण र नीलमणि फ्रिजिंग पोइन्ट कपाल हटाउने उपकरण बीचको भिन्नता
घर कपाल हटाउने उपकरण को FAQ
समय: 2020-11-18 हिट्स: 4
महिलाले सुन्दरता मन पराउँछन्, पुरुषले सुन्दर महिलालाई मन पराउँछन्, त्यसैले आधुनिक महिलाले आफ्नो उपस्थितिमा बढी र अधिक ध्यान दिन्छन्। सबै प्रकारका सौन्दर्य उपकरणहरू भारी छन्। ब्यूटी सैलुनको ढोकामा ग्राहकहरु पनि अनन्त छन्। यद्यपि एक नयाँ उत्पादले हालसालै ब्यूटी सैलुनबाट धेरै व्यवसाय निकाले। परम्परागत कपाल हटाउने विधि बाहेक, सौन्दर्य मन पराउने मानिसहरू सामान्यतया पेशेवर कपाल हटाउने उपचारको लागि सौन्दर्य सैलुन जान्छन्। तर यो घर कपाल हटाउने उपकरणको साथ, तपाईं अब घरमा ब्युटी सैलून कपाल हटाउने जस्तो प्रभाव प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस् प्रभाव राम्रो छ, घरमा अझै यो प्रयोग गर्दा अझै धेरै समस्याहरू छन्।
त्यसोभए, उपकरणको प्रयोग गर्दा हामी के समस्याहरू भेट्नेछौं, र हामीले यसलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्दछ।
१: बुट गर्न सक्दैन
जब धेरै ग्राहकहरु लाई उत्पादन प्राप्त हुन्छ, उनीहरुले सुचेत महसुस गर्नेछन् कि उत्पादन रिचार्जेबल देखिन्छ। त्यसोभए उनीहरूले यसलाई खोल्नको लागि कुर्नु सक्दैन जब यसलाई प्राप्त हुन्छ। तिनीहरू जान्दैनन् कि प्राय घर घर कपाल हटाउने उपकरणहरू प्रयोग गर्न प्लग इन हुनुपर्छ। त्यसैले पावरमा प्लग गर्न निश्चित गरेपछि, फेरि उपकरण खोल्नुहोस्।
२: सेन्सर सूचक प्रकाश गर्दैन, उपकरण प्रकाश प्रवर्धन गर्दैन
सुरक्षा कारणका लागि, सामान्य घरको कपाल हटाउने उपकरणहरूमा प्रकाश उत्सर्जक सूचकहरू हुनेछन्, र प्रकाश आउटलेट छालाको होशमा हुँदा मात्र प्रकाश उत्सर्जन गर्न सकिन्छ। मिसोपेरेसनबाट अलग रहनुहोस् जसले उपकरणको लागि प्रकाश उत्सर्जन गर्न र अन्यको वा आफुको आँखा चिम्चाउन सक्छ। त्यसकारण, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि उपकरणको प्रकाश आउटलेट प्रकाश गर्नु अघि छालाको नजिक छ।
:: सेन्सर सूचक चाँडै फ्ल्यास हुन्छ
सामान्यतया, सूचकको प्रकाशको द्रुत फ्ल्याशिंग डिभाइसबाट एक चेतावनी चेतावनी हो। नोबेल द्वारा उत्पादित आईपीएल फोटोन कपाल हटाउने उपकरणका लागि, यो अवस्था उत्पादनको दीर्घकालीन प्रयोग वा वातावरणीय उच्च तापमानको कारणले हुन सक्छ। नतिजाको रूपमा, गर्मी खपत समयमै छैन, र संकेत प्रकाश छिटो फ्ल्यास हुनेछ। यस समयमा, तपाईंले उपकरण प्रयोग गरेर निलम्बन गर्न आवश्यक छ र फेरि यसको प्रयोग गर्नु अघि उत्पादनको शान्त हुनको लागि कुर्नुहोस्।
:: प्रकाश गर्दा अनौठो गन्ध
यस अवस्थाको मुख्य कारण पोर्टेबल हो कि फिल्टर वा छालाको सतहमा धुलो वा कपाल अवशेषहरू छन्। इन्स्ट्रुमेन्टको कडा प्रकाश र तातो यी सूंड्रीहरू द्वारा अवशोषित हुनेछ ताकि झुलको कारण हुन्छ, परिणामस्वरूप अप्रिय गन्ध आउँछ। यस समयमा तपाईले फिल्टर वा छालाको सतह सफा गर्नु पर्छ।
:: इरेडिएसनको बेला कडा दुखाइ
यदि प्रकाशको समयमा दुखाइ कडा छ भने, हामीले विश्लेषण गर्नुको कारण यो हो कि तपाईले छान्नु भएको उर्जा तीव्रता धेरै छ, वा फिल्टर बिग्रिएको छ, परिणामस्वरूप छालामा धेरै प्रकाश उर्जा हुन्छ। यस समयमा, कृपया ध्यानपूर्वक फिल्टरको शुद्धता जाँच गर्नुहोस्, यदि यो बिग्रिएको छ भने, कृपया मर्मत वा समयमै प्रतिस्थापनको लागि आवेदन दिनुहोस्।
:: कपाल हटाउने प्रभाव आदर्श छैन
यस अवस्थाको लागि सायद तीन कारणहरू छन्। एक, गियर ऊर्जा चयन पर्याप्त उच्च छैन; b, भागको दोहोरिएको प्रकाशको संख्या पर्याप्त छैन; c, कपाल हटाउन को आवृत्ति पर्याप्त छैन। कृपया तपाईंको अवस्था तुलना गर्नुहोस् र माथिको तीन कारणहरूको आधारमा समायोजन गर्नुहोस्।
वर्तमानमा सामना गर्नुपरेका सामान्य समस्याहरू यी हुन्। यदि भविष्यमा अन्य समस्याहरू छन् भने, म तपाईलाई भर्न जारी राख्नेछु। नोबेल समर्थनका लागि धन्यबाद, हामी कपाल हटाउने उपकरणका एक पेशेवर निर्माता हो!
अघिल्लो: घर कपाल हटाउने उपकरण निर्माताहरू फेरि अनुसन्धान गर्न सुरु गर्दै, त्यहाँ नयाँ सुविधाहरू छन्।
अर्को: कुन घर कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्न सजिलो र प्रभावकारी छ
तपाईको मेलबक्स प्रविष्ट गर्नुहोस्, पहिलो पटक हाम्रो नयाँ घटनाक्रम जाँच गर्न।
शेन्ज़ेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
सेवा नम्बर ：400-668-0502
सेवा ईमेल ：[ईमेल सुरक्षित]
सेवा समय ： ०: ०० am~२:: ०० बेलुका
प्रतिलिपि अधिकार © २००-2004-२०१ N NOBLE